I-Granny Flat enokuthula Ezihlahleni - I-Airbnb
I-Granny Flat enokuthula Ezihlahleni
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Kimberly
Indlu yezivakashi ezungezwe izihlahla futhi ihluke ngokuphelele endlini enkulu. Ama-square ft angu-350 endawo yangasese engena endaweni yokungena eyenzelwe izivakashi kuphela. Ukushona kwelanga nengilazi yewayini noma ukuphuma kwelanga nekhofi lasekuseni kuvulandi wakho wangasese.
Ukuhlala OKUNCANE kobusuku obungu-6 futhi akukho mali yokuhlanza.
Leli fulethi le-granny linakho konke okudingayo ukuze ujabulele isonto e-San Diego. Kukhona ikhishi elinesiqandisi esincane, umshini wekhofi (ikhofi lamahhala ekuseni kokuqala), i-microwave ne-toaster. Igumbi lokugezela lineshawa enamathayili aphelele ene-shampoo, i-conditioner kanye nokugeza umzimba, enomfutho omkhulu wamanzi. Isiqandisini siza namanzi, ubisi nezinto ezimnandi. Sinikeza amashidi, umshini wokomisa ophephetha umoya, i-ayina nebhodi le-ayina, i-TV enesidlali sokustrima se-Roku, kanye ne-Wifi yamahhala.
Sizohlinzeka ngamashidi namathawula aqabulayo phakathi nokubhukha uma unesikhathi eside kunezinsuku eziyisikhombisa. Kunomgqomo wokuvuselela kabusha kuvulande emnyango wangaphambili. Sicela ubeke wonke amapulasitiki, iphepha kanye nemishini emgqonyeni wokulondoloza. Kukhona udoti ohlukile ngaphansi kosinki wasekhishini wokudla kwakho nodoti wasekhishini.
Indawo ifanele abantu ababili futhi ihlanganisa umbhede we-memory foam kanye netafula elincane nezihlalo. Kukhona i-dresser nendawo yokubeka izingubo.
Ekugcineni, sobabili sigonyiwe ngokuphelele.
4.98 · 283 okushiwo abanye
Lena indawo enhle ezungeze idolobha elikhulu egcwele izindlu zobuciko zase-California. Sinohambo lwekhaya lonyaka lwe-Craftsman, amakhaya amaningi, ethu afakiwe abhekwa njengomlando. I-Heritage Park iphansi egqumeni namakhaya amahle ase-Victoria asuswe endaweni yawo yasekuqaleni eya epaki ukuze izivakashi ziyijabulele.
Indawo ezungeze idolobha elikhulu ithule futhi kulula ukuya kuyo usuka ku-8 nomgwaqo ongu-5. Sisanda kukhuphuka egqumeni sisuka e-Old Town engokomlando nezinye zezindawo zokudlela zokudla ezihamba phambili zase-Mexico e-San Diego. Hamba uye endaweni yezentengiselwano yase-Mission Hills nase-Hillcrest.
Silapha ukuze sihileleke noma singekho ngendlela othanda ngayo. Uma ufuna ukusikisela kokudla isidlo sakusihlwa noma ukubuka indawo, vele ubuze. Sinikeza incwadi yemininingwane, kodwa uma udinga noma yini enye silapha. Ngaphandle kwalokho indawo nesikhathi sakho kungokwakho.
Silapha ukuze sihileleke noma singekho ngendlela othanda ngayo. Uma ufuna ukusikisela kokudla isidlo sakusihlwa noma ukubuka indawo, vele ubuze. Sinikeza incwadi yemininingwane, ko…